यस लेखमा विस्तार एम्पलीफायर सर्किट निर्वात ट्यूबों मा अध्ययन गरिनेछ। निस्सन्देह, यो प्रविधी पुरानो छ, तर यो दिन तपाईं "रेट्रो" को प्रशंसक पूरा गर्न सक्छन्। कसैले भर्खरै डिजिटल ट्यूब ध्वनि रुचि र कसैले कला दोस्रो जीवन दिने मा लगे, dilapidated, यो बिट बिट द्वारा दुरुस्त राखेको छ। धेरै अवैतनिक रेडियो संचालक, हावा मा काम गर्ने, केही योजनाहरु Cascades को निर्माण को लागि दीपक प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, तिनीहरूले ट्रांजस्टर देखि पनि जटिल हुनेछ, शक्तिशाली दीपक मा ठीक निर्माण गर्न सजिलो UHF।
संरचनात्मक एम्पलीफायर सर्किट
निम्नानुसार ब्लक रेखाचित्र छ:
संकेत स्रोत (माइक्रोफोन उत्पादन, फोन, कम्प्युटर, र यति मा। डी।)।
मात्रा नियन्त्रण - एक potentiometer (चल रोकनेवाला)।
को प्रिएम्प्लिफाइयर को दीपक (सामान्यतया ट्रांजस्टर), एक ट्रांजस्टर मा निर्माण गरिएको छ।
टोनलाई नियन्त्रण सर्किट को श्रृंखला Anode प्रिएम्प्लिफाइयर दीपक जोडिएको छ।
अन्तिम प्रवर्धक। सामान्यतया उदाहरण, 6P14S लागि, pentode मा प्रदर्शन गरिएको छ।
एउटा मिल्ने उपकरण, को एम्पलीफायर र डक स्पिकर सिस्टम को उत्पादन अनुमति। नियम, यो भूमिका ट्रांसफर्मर प्रकार (220/12 वाल्ट) तल प्ले छ।
बिजुली आपूर्ति, wherein दुई voltages उत्पन्न: स्थिर 250-300 वी र 6.3 वी एसी (12.6 आवश्यक भएमा)।
अनुसार ब्लक रेखाचित्र, सिद्धान्त निर्माण। यसलाई राम्ररी समस्या कारण छैन छ एम्पलीफायर निर्माण गर्न प्रत्येक सिस्टम नोड जाँच्न आवश्यक छ।
Lf पावर प्रवर्धक
माथि उल्लेख रूपमा, शक्ति आपूर्ति दुई फरक भोल्टेज मूल्य उत्पादन गर्नुपर्छ। यो गर्न, एक विशेष डिजाइन ट्रांसफर्मर प्रयोग गर्नुहोस्। सञ्जाल, दोस्रो र tertiary - उहाँले तीन windings हुनुपर्छ। उत्तरार्द्ध दुई 250-300 वी र 6.3 वी को एक एकान्तरण भोल्टेज उत्पादन, क्रमशः। 6.3 - ट्यूब फिलामेंट्स एक आपूर्ति भोल्टेज। र यो छ भने, एक नियम रूपमा, कुनै पनि उपचार, उदाहरणका लागि आवश्यक छैन, यो निस्पंदन र rectification मा, एसी 250 वोल्ट एक सानो परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यो एक शक्ति स्रोत गर्न एम्पलीफायर सर्किट जडान गर्न आवश्यक छ।
इलेक्ट्रोलिटिक capacitors - यो rectifier ब्लक, चार अर्धचालक डायोड र फिल्टर बनेको छ जो लागू गर्न। डायोड वर्तमान एकान्तरण सीधा र यसलाई स्थायी बनाउन अनुमति दिनुहोस्। एक संधारित्र एक रोचक सुविधा छ। तपाईं (Kirchhoff व्यवस्था गरेर) एसी र डीसी लागि बराबर सर्किट capacitors हेर्न भने, तपाईंले एक सुविधा देख्न सक्छौं। सञ्चालन मा, संधारित्र प्रतिबाधा निरंतर वर्तमान सर्किट मा बदलिएको छ।
तर एसी सर्किट मा सञ्चालन गर्दा एक सञ्चालकको खण्ड द्वारा बदलिएको छ। अर्को शब्दमा, जब एक शक्ति संधारित्र बैंक स्थापित तपाईं सफा डीसी भोल्टेज, सबै चर घटक कारण बराबर सर्किट मा छोटो-circuited टर्मिनलहरु गर्न गायब हुनेछ प्राप्त हुनेछ।
ट्रांसफर्मर लागि आवश्यकताहरू
एउटा महत्त्वपूर्ण अवस्था - anodes को आपूर्ति र रेशा yarns बल्ब लागि windings को आवश्यक नम्बर को उपस्थिति। जो आधारमा सर्किट प्रयोग एक शक्ति एम्पलीफायर फरक भोल्टेज बिजुली चमकिलो आवश्यक छ। मानक मूल्य - 6.3 वी तथापि, यस्तो जी-807, पीजी-50, रूपमा केही दीपक, आवश्यक 12.6 वी को एक भोल्टेज यो डिजाइन complicates र ठूलो आकार ट्रांसफर्मर को प्रयोग बनाउँछ छ।
तर तपाईं औंला दीपक (6N2P, 6P14P एट अल।), यस्तो शक्ति आपूर्ति भोल्टेज लागि आवश्यकता चमकिलो छैन मा केवल शक्ति सङ्कलन गर्ने योजना भने। आकार ध्यान - तपाईं एउटा सानो एम्पलीफायर सङ्कलन गर्न चाहनुहुन्छ भने, एक-तार ट्रांसफार्मर प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूले एक drawback छ - यो एक उच्च क्षमता प्राप्त गर्न असम्भव छ। त्यहाँ शक्ति को एउटा प्रश्न छ भने, यो ट्रांसफार्मर टीएस-180, टीएस-270 प्रयोग गर्न राम्रो छ।
उपकरणहरूको लागि आवास
कम आवृत्ति लागि एम्पलीफायरों सर्वश्रेष्ठ एल्यूमीनियमबाट आवास प्रयोग वा जस्ती छन्, radioelements को assembling आधा बाटो उत्पादन। छापिएको सर्किट बोर्ड मा assembling उपकरणको बेफाइदा - खुट्टा लागि दीपक सकेट हीटिंग लागि ट्रयाक बाट, यो नाश टांका delaminate गर्न थाल्छन्। हराएको सम्पर्क, र काम ULF अस्थिर हुन्छ, त्यहाँ अन्य ध्वनि छन्।
पूर्व-चरण मा एम्पलीफायर सर्किट ट्रांजस्टर लागू गरिएको छ भने, यो पीसीबी को एक सानो टुक्रा मा गर्न समझदार छ - थप विश्वसनीय हुनेछ। तर संकर को प्रयोग आफ्नो शक्ति आवश्यकताहरु बनाउँछ। यो एक गिटार ULF लागि काठ मामला मा प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। तर तपाईं एक धातु चेसिस, सम्पूर्ण उपकरण संकलित गरिने स्थापना गर्न आवश्यक भित्र। यो सजिलो प्रत्येक अन्य, आत्म-excitation र अन्य हस्तक्षेप को संभावना समाप्त जो देखि Cascades स्क्रिनमा बनाउँछ, धातु केसिङ लागू गर्न उचित छ।
मात्रा र स्वर समायोजन
एक सरल एम्पलीफायर सर्किट दुई नियमहरु द्वारा पूरक गर्न सकिन्छ - मात्रा र स्वर। पहिलो नियामक ULF को उपखाडी सिधै माउन्ट, यो आगमन संकेत को मूल्य परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं कुनै पनि डिजाइन को चर प्रतिरोधों को ULF राम्रो तरिकाले काम गर्नेछ भनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। संग टोन नियन्त्रण पनि समस्या उत्पन्न हुँदैन - पहिलो चरणको को Anode सर्किट समावेश चल रोकनेवाला। मात्र जो दिशा मा परिक्रमा गर्ने आरएफ थप्न बनाइएको छ, र lf लागि के क्षमता मा निर्धारण गर्न आवश्यक छ।
यसलाई अन्यथा यो डिजाइन प्रयोग गर्न कठिन हुनेछ, औद्योगिक एम्पलीफायरों देखि सबै तरिका गर्न उचित छ। तर यो एउटा सानो एकाइ, एक विस्तृत दायरामा फ्रिक्वेन्सी परिवर्तन हुनेछ जो स्थापना गर्न समझदार छ, बस टोन नियन्त्रण सर्किट छ। टोन, - योजनाहरु ट्यूब एम्पलीफायरों अर्धचालक मा सानो मोड्युलहरू हुनसक्छ कम पास फिल्टर। त्यहाँ टोन-आफैलाई उत्पादन गर्न कुनै इच्छा छ भने, यो पसलहरुमा खरिद गर्न सकिन्छ। यस्तो टोन को लागत एकदम कम छ।
तर ULF स्टेरियो सुन्न मोनो भन्दा धेरै nicer छ। र यो दुई पटक रूपमा कडा बनाउन - तपाईं नै मापदण्डहरू अर्को ULF सङ्कलन गर्न आवश्यक छ। फलस्वरूप, तपाईं दुई आदानों र धेरै आउटपुटहरू प्राप्त। र शक्ति एम्पलीफायर सर्किट र प्रारम्भिक चरणमा अन्यथा प्रदर्शन भिन्न हुनेछ समान हुनुपर्छ।
सबै capacitors र प्रतिरोधों नै मापदण्डहरु को - चर र tolerances को मान देखि। प्रतिरोध परिवर्तन गर्न लागि विशेष आवश्यकताहरु - लागि मिलेर डिजाइन प्रयोग गरिनुपर्छ मात्रा नियन्त्रण, र टोन। यो दुवै च्यानलहरू यी मापदण्डहरू समायोजन को एकरूपता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ भन्ने विचार।
तर ध्वनि गुणस्तर सुधार गर्न, तपाईं कम आवृत्तियों विस्तार हुनेछ कि एक subwoofer थप्न सक्नुहुन्छ। समग्र एम्पलीफायर जडान सर्किट परिवर्तन गर्दैन, केवल तेस्रो ब्लक थपिएको छ। बायाँ च्यानल, दायाँ, subwoofer लागि एक - वास्तवमा, तपाईंले तीन पूर्ण समान मोनो एम्पलीफायरों हुनुपर्छ।
को subwoofer मा मात्रा नियन्त्रण गर्ने सी एफ पी अलग छ भनेर याद गर्नुहोस्। यो लाभ स्तर परिवर्तन गर्न भविष्यमा अनुमति दिन्छ। धेरै capacitors र प्रतिरोधों समावेश जो एक सरल सर्किट, द्वारा कार्यान्वयन "अतिरिक्त" आवृत्ति ट्रिम। तर तपाईं तयार बनाएको कम पास फिल्टर, रेडियो घटक कुनै पनि पसलमा बेचिन्छ जो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी ट्यूब एम्पलीफायरों, अक्सर आफ्नो डिजाइन मा hams बारम्बार जो को योजना जांच गरेका छन्। एक टांका फलाम र प्राविधिक साहित्य कसरी ह्यान्डल गर्न चिन्ने मानिसको शक्ति अन्तर्गत तिनीहरूलाई आत्म-निर्माण। तर तपाईं रोकनेवाला र केहि सिक्न प्रयास छैन, र एक एम्पलीफायर आवश्यक संघनित्र बीच भेद सक्दैन भने, यो सबै भन्दा राम्रो अनुभवी मालिकले VLF बनाउन अनुरोध छ।
फोनमा एक स्तम्भ कसरी बनाउने?
को प्रोजेक्टर लागि सही बल्ब कसरी चयन गर्न
राम्रो एपिलेटर हरेक केटी हुनुपर्छ
Deaerator - यो के हो? उपकरणको प्रकार, सञ्चालन सिद्धान्त
कस्मेटिक्स "MAK": खनिज पाउडर। वर्णन, प्रकार, सुविधा र समीक्षा
घरमा रातो खरानी को रक्सी कसरी तयार